इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ– भविष्यमा काम पनि, दाम पनि - Engineers Post
ई. विकास बहादुर श्रेष्ठFebruary 25, 2021
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ किन रोज्ने भन्ने निस्कर्षमा पुग्न हामी मानव सभ्यताको विकासमा जानुपर्छ । मानव सभ्यताको विकासमा महत्वपूर्ण पाटो भनेको औधोगिक क्रान्ति हो । त्यो क्रान्ति सफल हुनुको मुख्य कारण थियो, मेसिनहरुको विकास । मेसिनहरुको विकास हुनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरुको थियो र हालसम्म छ पनि ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले यस विषयलाई जन्म दिएको हो । हाल नेपाली बजारमा सिभिल, कम्प्युटर इन्जिनियरको माग बढी भएकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयप्रति विधार्थीको आकर्षण कम छ । तर, रिसर्च गर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको मागअनुसार दरबन्दी पुरा हुँदैनन् ।
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङबिना कुनै पनि इन्जिनियरिङका विधा पूर्ण हुँदैनन् । चाहे सिभिल होस्, कम्प्युटर होस्, इलेक्ट्रोनिक्स होस्, बायो मेडिकल होस् या आर्किटेक्ट नै किन नहोस् । विगत होस् या वर्तमान, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको महत्व हाम्रो समाजमा झन्पछि झन् बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले विधार्थीले ढुक्कसँग यो विषय पढ्दा भविष्य राम्रो छ ।
विदेशतिरको हकमा विद्युत् उत्पादन र वितरण÷प्रसारण, कम्प्युटरको माइक्रोचिप्स बनाउने, न्यूक्लियर पावर प्लान्ट बनाउने काम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण, एरोस्पेस, वैकल्पिक ऊर्जा, मेडिकल इक्वेपमेन्ट क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, भू–उपग्रहलगायत क्षेत्रमा अवसर छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हुन्छ । त्यसैले वर्तमान समयमा मात्र नभई अबको ५ देखि २० वर्षको अन्तरालमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग अत्याधिक रुपमा बढ्ने निश्चित छ ।
कोरोनापछि विश्वमा सबैभन्दा बढी माग भएको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो भने त्यसपछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो । बायोमेडिकल विषय पढ्न पनि सुरुमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले पाउँछन् ।
अर्को भनेको विद्युत् प्राधिकरणे २०६७÷६८ तिर एकैपटक १३३ जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मागेको थियो । त्यसबेला माग नै पूर्ति भएको थिएन । प्राधिकरणले मात्र हरेक वर्ष २०÷३० जनाका लागि आवेदन खोल्छ । त्यसबाहेक बुटवल हाइड्रोपावर, सानिमा हाइड्रो पावर, हिमाल, चिलिमे लगायत विभिन्न हाइड्रोपावरले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग गर्छन् । जलविद्युत् विकासमा काम गरिरहेका स्वदेशी÷विदेशी कन्ट्राक्टरले पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्वदेश तथा विदेशमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको राम्रो स्कोप रहेको मान्न सकिन्छ ।
यी क्षेत्रमा बढी स्कोप
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ हो । जहाँ ठूला–साना जलविद्युत् आयोजनाहरु चलिरहन्छन् । यस्ता आयोजनाको विकास, वितरण र व्यवस्थापन गर्ने काम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको ५ देखि १० वर्षभित्रमा सयौँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग हुन्छ ।
नेपाल सरकारले २०७५ देखि ८५ को दशकलाई ऊर्जा दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसमा कम्तीमा १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर उत्पादन गर्नुपर्यो । त्यो पुरा गर्न विधार्थीले अहिले नै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियिरिङ पढ्यो भने काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा पर्छन् । त्यसको डिजाइन र व्यवस्थापन पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले नै गर्छ । नेपालमा हवाई क्षेत्रको पनि विकास भएको छ । एरोस्पेस, भू–उपग्रहमा पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर नभइ हुँदैन ।
त्यसबाहेक कम्प्युटरको सिस्टम डिजाइन पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले नै गर्ने हुन् । तर यो कुरा धेरैले बुझ्दैनन् । इन्डष्ट्रियल अटोमेसन, इलुमेसन पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको विषय हो । नेपाल औधोगिक विकासको चरणमा छ । नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट र अन्य कारखानाहरु सञ्चालित छन् । त्यसलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम इलेक्ट्रिकल इन्जिनिरको हुन्छ ।
भेन्टिलेसन, एनेस्थेसिया मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, सिटी स्कान मेसिन, एमआरआई लगायत जीवन मरणसँग सम्बन्धित मेडिकल उपकरणको डिजाइन गर्न पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर चाहिन्छ ।
ई. विकास बहादुर श्रेष्ठ
आइओईबाट सुरु भएको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयको पढाई सिमित छ । त्रिविका आंगिक र निजी कलेजमा यो कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । जहाँ ४८÷४८ वटा सिट मात्र छन् । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि सिमित सिटसहित यो विषय पढाइ हुन्छ । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयका लागि नेपालभर करिब ३०० सिट उपलब्ध छ ।
पढाइका लागि विधार्थीले सही कलेज पनि छनोट गर्नुपर्छ । विधार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक ज्ञान पनि सिक्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि नेपालभित्र केही कलेजहरु मात्र उपलब्ध छन् । पुल्चोक कलेजपछिको सबैभन्दा व्यवस्थित र परिपूर्ण ल्याब काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, एड्भान्स्ड कलेज र नेशनल कलेजमा छ । जहाँ ४८–४८ वटा सिट मात्र उपलब्ध छ ।
किन रोज्ने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ?
अहिलेको अधिकांश विधार्थीले सिभिल इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । यस्तै केही सिमित विषय रोज्छन् । यी विषय पढेका विधार्थीले पूर्वाधार विकास क्षेत्रतिर कामको अवसर पाउँछन् । पूर्वाधार विकास भइसकेपछि सिभिल इन्जिनियरको माग कम हुँदै जान्छ । पूर्वाधार विकासमा पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले कामको अवसर पाउँछन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको बढ्दो महत्वबारे अहिलेका भाइबहिनीले बुझ्दैनन् ।
अहिले भर्ना भएर सर्टिफिकेट पाउन र फिल्डमा गएर काम गर्न करिब ५ वर्ष समय लाग्छ । ५ वर्षको अन्तरालमा प्राप्त गर्न सकिने अवसरका बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यसैले विधार्थी भाइबहिनीले वर्तमान परिस्थितिलाई हेरेर नभई भविष्यको लागि आफूले कुन विषय रोज्ने भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ । नेपालले घोषणा गरेको ऊर्जा वर्षका लागि कति इन्जिनियर चाहिने होला ? त्यसतर्फ ध्यान दिएर विषय रोज्नुपर्छ ।
अबको युग भनेको ऊर्जा, बायोमेडिकल उपकरण, उद्योग, प्रविधिको हो । विश्वभर यिनै कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबै कुरा नजरअन्दाज गरेर हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा काम लाग्ने इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको राम्रो स्कोप छ ।
(व्यावसायीक इन्जिनियर श्रेष्ठ एड्भान्स्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख एडभाइजर, प्राफेसर हुन् । आइआईटी बम्बईबाट इलेक्ट्रिकल र वायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेका उनीसँग २० वर्षको प्रोफेसनल अनुभव छ । सन् २०१८ मा उनले प्रोफेसनल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको उपाधी पनि जितेका थिए । उनी वायोमेडिकल इन्जिनियरिङ फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्षसमेत हुन्)
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङः स्कोप धेरै, आकर्षण कम
#इन्जिनियरिङ #इलेक्ट्रिकल #इलेक्ट्रिकल_इन्जिनियरिङ
किन ढलिरहेका छन् नेपालका पुल, यस्ता छन् इन्जिनियरिङ कारण
इन्जिनियर मित्र बराल ‘प्रवल जनसेवा श्री’ चतुर्थ श्रेणीबाट विभूषित
पूर्वगुगल इन्जिनियरको बाचा, ‘एक वर्षसम्म हिंसा भोगेँ, अब जागिरमा कहिल्यै फर्किन्नँ’
कृषि इन्जिनियरको दरबन्दी माग गर्दै नेपाल कृषि इन्जिनियर्स सोसाइटीले बुझायो ज्ञापनपत्र
इन्जिनियरिङको परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीमा कोरोना, परीक्षा केन्द्रमा त्रास
योग र अध्यात्ममा लाग्छन् अधिकांश इन्जिनियरहरु
उम्मेदवारी कायम हुने विषयमा जिल्ला प्रशासनले पठायो नेईएलाई यस्तो पत्र (पत्रसहित)
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण
इतिहासमै पहिलो पटक नासाले मंगल ग्रहमा उडायो हेलिकप्टर
कम्युटर पढेका इन्जिनियरको फाराम रद्द फलोअप– भन्सार नियमावली परिवर्तन गरिने !
लोक सेवा आयोगले प्रदेश एकमा माग्यो इन्जिनियरिङ सेवामा ८३ जना (विज्ञापनसहित)
कन्सल्टिङ क्षेत्रमा पिसि आतंक– प्रोजेक्ट मिलाइदिएवापत ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको खल्तीमा
रेमिट हाइड्रोले माग्यो इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर (विज्ञापन)
नेईए निर्वाचन समितिका सदस्य चौलागाईंले दिए राजीनामा, कारण यस्तो
प्रदेश २ का सभापतिका उम्मेदवार दिपेन्द्र भन्छन्ः सबै प्रमाण छ, म अदालत जान्छु